लाइफ इन्स्योरेन्सको अभिकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक सोनु शर्माद्वारा मोटिभेसन कार्यक्रमलाइफ इन्स्योरेन्सको अभिकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक सोनु शर्माद्वारा मोटिभेसन कार्यक्रम – Naya Page
लाइफ इन्स्योरेन्सको अभिकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक सोनु शर्माद्वारा मोटिभेसन कार्यक्रम
काठमाडौं, १६ बैशाख। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीप्राप्त बीमा प्रशिक्षक मार्फत ‘मोटिभेसनल सेसन विद सोनु शर्मा’ कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले आफना देशभरका १ हजार ३ सय ४५ सक्रिय अभिकर्ताहरुको लागि कार्यक्रम गरेको हो ।
सर्वाधिक विश्वासिलो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्तापूँजी जीवन बीमा क्षेत्रकै सर्वाधिक रू. ८ अर्ब २१ करोड रहेको छ भने लगानी रू. १३८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।